8 famantarana ny mamaivay ao amin`ny urethra. – Noor Health Life
8 famantarana ny mamaivay ao amin`ny urethra.
Aretina mampanaintaina be ny areti-mifindra amin’ny urethra ka maro no misalasala miresaka momba izany.
Fantatrao ve anefa fa tena mibaribary ny soritr’io inflammatoire na UTI io ary matetika dia azo fantarina na alohan’ny hanombohan’ny aretina aza?
Noor Health Life dia nilaza fa miharihary ny soritr’aretin’ity areti-mifindra ity fa ny ankamaroan’ny olona dia tsy miraharaha izany.
Na izany aza, raha te hamantatra ny aretin’ny urine ianao, dia tsy maintsy tadidinao ireo soritr’aretina ireo.
Ny mamaivay ny urethra dia mora ny misoroka
Mamporisika ny hisotro rano amin’ny fotoana rehetra
Io no soritr’aretina mahazatra ny UTI izay mahatsiaro ho te hivoaka foana ianao, na dia vao avy nandalo tao amin’ny trano fidiovana aza ianao dia mety hahatsapa maika amin’io lafiny io izany hoe mandeha avy hatrany. Ilaina sns.
Kely be ny urine
Rehefa mandeha any amin’ny trano fidiovana ianao dia mahalana vao mi-pite, mahatsiaro ho tsy maintsy manao bebe kokoa nefa tsy afaka manao izany na dia eo aza ny ezaka ataonao na tsy afa-po.
Mahatsiaro ho sosotra
Ny fandehanana any amin’ny trano fidiovana mandritra io aretina io dia mety hahatonga anao ho sosotra, mety hahatsapa ianao fa tena maharary ity asa ity, ankoatra izany dia mety hisy fanaintainana, amin’ireo tranga roa ireo dia famantarana ny aretina.
Matetika ny UTI no miteraka rà ao amin’ny urine, saingy tsy voatery ho an’ny olona rehetra, satria mety ho manjavozavo ny fahitana.
Ny fofon’ny urinaire dia tena ratsy vokatry ny karazana otrik’aretina rehetra ao amin’ny tatavia.Raha toa ka sendra misy soritr’aretina eo ambony ihany koa ianao, dia mety ho UTI izany.Mitondrà fitiliana araka ny toromariny.
Antony mahazatra ny mamaivay ny lalan-dra
Ny lokon’ny urine dia afaka milaza zavatra maro, anisan’izany ny aretina amin’ny lalan-drà. Raha toa ka zavatra hafa ankoatra ny mavo na mangarahara io loko io, dia mariky ny ahiahy izany. Ny mena na volontsôkôlà dia mariky ny aretina, fa jereo aloha fa tsy nihinana sakafo mavokely, voasary na mena ianao.
Ny inflammation amin’ny tract urinaire dia vokatry ny otrik’aretina ao amin’ny tatavia. Na izany na tsy izany, vokatry ny aretina, rehefa tsapan’ny vatana fa misy zavatra tsy mety dia manomboka mivonto izy. miteraka fahatsapana harerahana.
Ny tazo, ankoatry ny soritr’aretina hafa, dia matetika manondro ny fitomboan’ny hamafin’ny mamaivay ao amin’ny taratasy mivalona amin’ny urine sy ny fihanaky ny aretina mankany amin’ny voa. Raha voan’ny tazo mihoatra ny 101 Fahrenheit ianao na mangatsiaka na sempotry ny hatsembohana ny vatanao rehefa matory amin’ny alina, dia tokony hitady fanampiana avy hatrany amin’ny mpitsabo ianao.
Aretina mampanaintaina tokoa ny areti-mifindra amin’ny urethra ary maro ny olona no misalasala miresaka momba izany.
Misy ihany koa ny mety hisian’ny aretin’ny voa vokatry io aretina io na mamaivay ary ny soritr’aretiny dia matetika miseho amin’ny endriky ny fahamaizana sy ny fanaintainana ao amin’ny urine, ary ny faniriana matetika ny urine, ny fiovan’ny loko, ary ny tazo, izay miakatra. amin’ny tranga matotra.
Famantarana ihany koa ny fandehanan-dra sy ny fisotro madio.
Raha tsy voatsabo na tsy voatsabo ny aretina, dia mety hiparitaka avy any amin’ny tatavia mankany amin’ny voa ilay aretina ka miteraka areti-maso ny voa, izay mety hahafaty.
Misy ihany anefa ny antony sarotra fehezina, toy ny fahanterana, ny vehivavy no atahorana kokoa noho ny lehilahy, ny fitondrana vohoka, ny vato voa, ny diabeta sy ny aretin’i Alzheimer, sns.
Saingy misy ihany koa ny fomba fiaina sasany izay mampitombo ny mety hisian’ny aretina.
Aza mikarakara ny fahadiovana
Raha ny marina, ny tsy fahampian’ny fahadiovana dia mety hitarika amin’ny fitomboan’ny isan’ireo bakteria ireo, izay mampitombo ny mety ho areti-mifindra amin’ny lalan-drà.
Misotroa rano kely
Ny fanadihadiana nataon’ny Noor Health Life dia nahatsikaritra fa ny fahazarana misotro rano betsaka dia mampihena ny mety ho areti-mifindra amin’ny lalan-drà, indrindra ho an’ny vehivavy. Araka ny fikarohana natao, ny fomba tsotra sy azo antoka indrindra hialana amin’ity aretina mampahory ity dia ny fisorohana ny aretina ary ny fisotroana rano iray litatra mihoatra ny mahazatra dia manampy amin’ny fisorohana ity aretina ity. Araka ny fikarohana natao dia ny vehivavy no atahorana ho voan’io aretina io noho ny lehilahy, saingy tokony handray izany fepetra izany koa ny lehilahy. Nambarany fa ny fisotroana rano betsaka dia manamora ny fanalana ireo bakteria miangona ao amin’ny tatavia ary tsy miangona izay mahatonga ny aretina.
Mampiasà akanjo tery
Ny fampiasana matetika ny akanjo tery dia mety miteraka aretina mangirifiry toy ny areti-maso na ny areti-mifindra amin’ny lalan-drà.
Noho ny asa, na mora na inona na inona antony, ny tsirairay amintsika dia olona mitsahatra tsy mipi-kisoa ary tsy ratsy izany fa raha tsy manomboka manao izany na manao fahazarana. Raha miforona ny fahazarana toy izany, dia mety hiteraka olana goavana izany. Ny fanaovana izany dia mampitombo ny fitomboan’ny bakteria mampidi-doza, izay mampitombo ny mety ho mamaivay ny lalan-dra.
Misy leviora manokana (VCUG) fandrefesana ny tsindry ao anatin’ny tatavia sy ny urethra mandritra ny fipihana izay hampiseho amin’ny alalan’ny x-ray ny zava-mitranga rehefa mipit-piterahana ny zanakao.
System urinary (vehivavy)
Ny VCUG dia midika hoe “manitatra cysto-retrograma”) izay midika hoe mi-pite. Ny “Cysto” dia natao ho an’ny tatavia. Ny “Urethro” dia natao ho an’ny urethra, ny fantsona mamoaka urine amin’ny tatavia. “Gram” dia midika hoe sary. Noho izany, ny VCUG dia sarin’ny fivoahana urine avy amin’ny tatavia amin’ny urethra.
Ny fitsapana dia mampiasa karazana hamandoana manokana antsoina hoe medium contrast mba hitaratra tsara kokoa ny urine amin’ny taratra X.
Omano ny zanakao amin’ny fitsapana
Makà fotoana hamakiana tsara an’io fanazavana io ary hazavao amin’ny zanakao izany. Ny ankizy izay mahafantatra ny zavatra andrasana dia tsy dia manahy loatra. Lazao amin’ny zanakao ny momba ny fitsapana amin’ny teny azony, miaraka amin’ny teny ampiasain’ny fianakavianao mba hahatakarana ny fomba fiasan’ny vatana.
Ao anatin’ny fitsapana dia hisy fantsona kely antsoina hoe catheter hampidirina ao amin’ny urethra-n’ny zanakao. Hanaintaina ny fampidirana ny catheter. Fa raha mijanona ho tony ny zanakao dia mahazo aina kokoa ny mitafy azy. Azonao ampianarina ho tony ny zanakao amin’ny alalan’ny fofonaina lalina. Angataho ny zanakao handika ny labozia fitsingerenan’ny andro nahaterahana, hampiakatra balaonina na hamoaka bubbles. Ataovy ao an-trano izany fanazaran-tena izany alohan’ny hahatongavana any amin’ny hopitaly.
Ny tanora indraindray dia mitondra zavatra mahafinaritra horaisina mandritra ny fitsapana. Afaka mitondra kilalao landihazo na bodofotsy avy any an-trano ny zanakao.
Ny iray amin’ireo ray aman-dreny dia afaka miaraka amin’ny zaza amin’ny fotoana rehetra mandritra ny fitsapana. Raha bevohoka ianao dia afaka mijanona ao amin’ny efitrano mandra-pidirana ny catheter. Fa tsy maintsy mivoaka ny efitrano mandritra ny X-ray ny zaza.
Mila miteny amin’ny zanakao ianao fa ny dokotera na ny teknôlôjia dia afaka mikitika ny fivaviany mba hanadiovana azy sy hametraka fantsona ao anatiny. Lazao ny zanakao fa navelanao hikasika azy izy satria hanampy ny fitsapana.
Teknolojia roa no hanao ny andrana
Ny teknôlôjia dia manam-pahaizana manokana amin’ny implants catheter sy X-ray. Indraindray ny radiologista dia tsy maintsy ao amin’ny efitrano mandritra ny fitsapana. Ny radiologista dia mamaky ny X-ray.
System urinary (lehilahy)
Ny teknolojista X-ray dia hanomana ny zanakao amin’ny fitsapana amin’ny filazana azy izay hitranga mandritra io fotoana io. Ny radiologista dia hanadio ny faritra alehan’ny filahian’ny zanakao na ny urethra. Hampidirin’ilay teknôlôjia amin’ny toerana malalaka ilay fantsona mivelatra. Ny catheter dia fantsona lava, manify, malefaka, malefaka izay mandalo amin’ny urethra mankany amin’ny tatavia. Hazavain’ny teknolojia isaky ny mihetsika izany, toy ny ataon’izy ireo.
Raha marary fo ny zanakao
Mety mila mandray antibiotika ny zanakao alohan’ny hanaovana fitiliana. Ohatra, ny ankizy manana aretim-po dia mila mandray antibiotika alohan’ny handehanana any amin’ny mpitsabo nify. Ny antibiotika dia fanafody mamono otrikaretina. Raha mila an’io fanafody io ny zanakao dia lazao amin’ny dokotera izay manome VCUG ho an’ny zanakao. Ny dokotera dia haka an’io fanafody io alohan’ny hanomezana ny zanakao VCUG.
Ny VCUG dia matetika atao any amin’ny hopitaly
Ny tsindry ao anatin’ny tatavia sy ny urethra mandritra ny urine dia hitan’ny Departemantan’ny Diagnostic Imaging. Matetika izy io no antsoina hoe sampana X-ray. Raha tsy fantatrao ny toerana misy an’ity departemanta ity dia fantaro avy amin’ny fandraisana voalohany.
Maharitra 20 ka hatramin’ny 30 minitra io fisavana io. Aorian’ny fitsapana dia tsy maintsy mijanona eo amin’io faritra io mandritra ny 15 minitra eo ho eo mandra-pahavitan’ny sketches.
Nandritra ny fitsapana
Rehefa miditra ao amin’ny Departemantan’ny Imaging Diagnostic ianao, dia hapetraka ao amin’ny efitrano fisoloana akanjo tokana ny zanakao, manao akanjo fitafy hopitaly. Ny zanakao dia hoentina any amin’ny efitrano X-ray. Ray aman-dreny iray ihany no afaka hiaraka amin’ilay zaza.
Ao amin’ny efitrano X-ray
Raha vantany vao tafiditra ao amin’ny efitrano X-ray ianao sy ny zanakao, dia hangataka anao ny teknolojista mba hanala ny diaper amin’ny atin’ny zanakao. Dia handry eo ambony latabatra X-ray ny zanakao. Azo asiana fehikibo fiarovana ny kibo na ny tongotry ny zanakao mba hahazoana antoka fa tsy misy dikany ny zanakao.
Ny fakantsary eo ambony latabatra dia haka sary. Hampiasa televiziona ny mpandinika ny teknolojia hijerena ny zava-mitranga mandritra ny andrana.
Rehefa manao X-ray ny teknolojista dia mila milamina araka izay azo atao ny zanakao mba hahazoana vokatra tsara indrindra. Azonao atao ny mitazona ny tanan’ny zanakao miakatra kely amin’ny tratranao mba hahafahanao manelingelina ny sain’ny zaza amin’ny lafiny rehetra. Azonao atao, ohatra, ny mihira tononkalo na hira iray.
Ny teknôlôjia X-ray dia hanomboka ny fitsapana amin’ny fanadiovana ny faritra miafina amin’ny zanakao ary mampiditra fantsona. Ny catheter dia hamoaka ny tatavia ho azy.
Ny catheter dia hafatotra amin’ny tavoahangy misy fitaovana mifanohitra. Hikoriana amin’ny alalan’ny fantsona antonony mankany amin’ny tatavia io fifanoherana io. Izany dia ahafahan’ny teknolojista hijery tsara kokoa ny ao anatin’ny tatavia sy ny urethra. Ho afaka hahatsapa ny fifanoherana ny zanakao rehefa mandalo amin’ny tatavia izy. Mety hahatsiaro ho mangatsiaka nefa tsy handratra.
Ny teknôlôjia X-ray dia haka X-ray rehefa mikoriana ao anaty tatavia ny fitaovana mifanohitra. Rehefa feno ny tatavin’ny zanakao, dia asaina mi-pite ao anaty vilia na diaper ny zanakao. Hivoaka mora foana ny catheter raha vao mi-pite ny zanakao. Ny teknôlôjia dia haka X-ray rehefa mipipy ny zanakao. Ireo no sary manan-danja indrindra amin’ny fitsapana.
Ny teknôlôjia X-ray dia hilaza aminao ny fomba ahatongavana any amin’ny efitrano fisoloana akanjo mba hahafahan’ilay zaza mitafy ny akanjony. Dia mipetraka ao amin’ny efitrano fiandrasana ianao. Rehefa avy nanamarina ny sketsa X-ray dia hilaza aminao ny teknolojista hoe rahoviana ianao no afaka mandeha.
Raha manana fotoana any amin’ny toeram-pitsaboana ianao mba hijery dokotera aorian’ny fitsapana dia lazao amin’ny teknolojista. Hahazo antoka izy ireo fa alefa any amin’ny toeram-pitsaboana ny vokatrao. Raha tsy mahita dokotera ianao aorian’ny fitsapana dia halefa any amin’ny dokoteran’ny zanakao ao anatin’ny herinandro ny valiny.
Omeo ranon-javatra betsaka ao an-trano ny zanakao
Indraindray aorian’ny fitsapana dia mety hahatsapa tsy mahazo aina ny zanakao, toy ny fahatsapana may rehefa mi-pite. Omeo ranon-javatra betsaka hosotroina ny zanakao mandritra ny iray na roa andro manaraka, toy ny rano na ranom-paoma. Ny fisotroana toaka dia hanampy ny zanakao raha manana olana izy.
Raha manana fanontaniana momba ny fiantraikan’ny QuoteTest ianao dia jereo ny Technologist. Raha tsy milamina ny zanakao mandritra ny 24 ora mahery, antsoy ny dokoteran’ny fianakavianao.
(VCUG) dia fitsapana mampiasa taratra x-ray mba hahitana izay mitranga rehefa mi-pite ny zanakao.
Mandritra ny fitsapana dia hisy urethra ampidirina ao anaty urethra ny zaza.
Mety maharary ny fitsapana. Azonao atao ny mampiala voly ny zanakao ao an-trano alohan’ny hanaovana ny fanadinana, toy ny fanazaran-tena miala sasatra. Afaka mifandray amin’i Noor Health Life amin’ny alàlan’ny mailaka sy WhatsApp ianao raha mila fanontaniana sy valiny bebe kokoa. noormedlife@gmail.com